Xildhibaan katirsan KGS oo qayla dhaan ka muujiyay Carruur ay Al-shabaab ka Afduubtayn Bakool – Kalfadhi
Xildhibaan katirsan KGS oo qayla dhaan ka muujiyay Carruur ay Al-shabaab ka Afduubtayn Bakool
Xildhibaan Cabdirisaaq Cali Aadan, oo sidoo kale ah Wasiir ku xigeenka Amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la hadlay Kalfadhi ayaa walaac ka muujiyay ku dhawaad 100 Carruur ah oo ay Al-shabaab ka Afduubtayn degmooyin katirsan Gobolka Bakool si ay uga bar-bar dagaalamaan. Xildhibaan Cabdirisaaq oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto Bakool, waxa uuna dalbaday in si deg deg wax looga qabto Cabashada dadweynaha.
Wasiir ku xigeenka Amniga ee maamulka KGS ayaa sheegay iney soo wacayaan odayaal iyo waxgarad ka cabanaya carruurtooda oo ay Al-shabaab ka qabsadeen kadibna la geeyay Xerooyin tababar oo ku yaala meelo ka baxsan Bakool. Sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay ka fariisteen ayna dhawaan sameyn doonaan ka hortag iyo dib u soo celin Carruurtii ay Al-shabaab Afduubtayn.
“Dhibka waa ka jiraa Bakool, markii hore Bay ayuu ka taagnaa Afduubka laakiin hada waa fiday, waxaana wadnaa dadaal looga hortagayo qorshaha Askareynta Carruurta ee Al-shabaab”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Cali Aadan oo sidoo kale katirsan Golaha Wasiirada ee Koonfur Galbeed. “Carruurta ay Afduubtayn waan soo badbaadin doonaa, waxaana socda dabagal lagu haayo halka ay geeyeen”, ayuu yiri Cabdirisaaq Cali Aadan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Koonfur Galbeed ayuu ka dalbaday iney ka qeybtaan soo badbaadinta Carruur gaareysa ku dhawaad 100 Wiil oo u dhaxeysa da’da 8 jir ilaa 15 sano Jir, kuwaas oo dhamaantood laga qabtay degmooyinka gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya.
“KG oo kaliya waxba kama gasho xaaladaan, waxay u baahan tahay taageerada DFS, waayo Al-shabaab waxay Afduubanayaan Carruur waxayna ku sii hol cinayaan dagaalka Soomaaliya”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Cali Aadan oo sidoo kale ah Wasiir ku xigeenka Amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya. “KG waa kawar heysaa waana u sheegnay Madaxweynaha, waxay qayb ka tahay qorshahiisa howlgal ee dhawaan ka bilaaban doona degaanada Maamulka KGS”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Cabdirisaaq Cali Aadan oo katirsan Baarlamaanka maamulkaasi.
Hore ayaa waxaa jiray qayla dhaan ka soo baxaysay Odayaasha dhaqanka ee Gobolka Bakool iyo Mas’uuliyiinta Amniga ee Gobolkaasi, kuwaas oo dhamaantood ka cabanayey Carruur kabadan 75 qof oo laga Afduubtay Gobolka Bakool. Al-shabaab ayaa la sheegay in Carruurtaasi ay tababar ugu qabanayaan meelo ka baxsan Gobolka Bakool waxayna waalidiinta Carruurta dhalay u sheegayn in labarayo diinta Islaamka, balse warar la helay ayaa xaqiijinayo iney ku jiraan Tababar Askarnimo ayna ka mid noqonayaan dagaalamayaasha Al-shabaab.
Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo sheegay in horumar wanaagsan uu gaaray gobolka Banaadir